जिउँदै भए पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाज्यू भन्नुस, ‘नागरिकता बाँड्दा राष्ट्रघात हुँदैन’ - Jhilko
जिउँदै भए पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाज्यू भन्नुस, ‘नागरिकता बाँड्दा राष्ट्रघात हुँदैन’
२६ चैत्र, काठमाडौं । जनकपुरमा नागरिकता नपाएकाहरू भन्छन् – ‘पूर्व मुख्य सचिव बिमल कोइराला जिउँदै भए भन्नुस नागरिकता बाँड्दा राष्ट्रघात हुँदैन । बाँड्न पो ढिला भयो ।”
०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको माग राखी भएको आन्दोलन सफल भएपछि सिडियो भएर विमल कोइराला धनुषा जिल्ला पुगेका थिए । त्यतिखेर नागरिकता संघर्ष समितिको नामबाट त्यहाँ रिले अनसनको दबाबमुलक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
अहिले प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख प्रतिपक्षी रामसरोज यादव, संघीय सरकारमा मन्त्री भइसकेका महेन्द्र यादव लगायतका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको एक समूह तत्कालीन सिडियो विमल कोइरालालाई जनकपुरको बंशी चौकमा भएको भवनमा भेट्न पुगेका थिए । त्यहाँ अनसनकारीहरू अन्यायमा परेको बताउँदै नागरिकता दिन आग्रह गरेका थिए । तत्कालीन सिडियो बिमल कोइरालाले कांग्रेसका ती व्यक्तिहरूलाई तपाईहरूको सरकार छ नियम कानुन बनाउन लगाउनुस भनेका थिए । अनसनकारीहरूलाई पनि कानुन बनाउन दबाबमुलक अन्य कार्यक्रम गर्न भनेपछि त्यो अनसन रोकिएको थियो ।
त्यत्तिञ्जेल सिडियो भएका विमल कोइराला मुख्य सचिव भएर सेवा निवृत भए । उनले भनेको कानुन अन्तरिम संविधानमा बन्यो । जन्मसिद्ध नागरिकता त्यो समस्याको समाधानको रुपमा देखियो । भारतीयले अन्तरिम संविधानको त्यो प्रावधानबाट नागरिकता लिए भन्नु गलत हो । त्यो प्रावधान उनीहरूका लागि सहज भएको हुन सक्छ । किनभने पैसा तिरेर नागरिकता लिनेहरू तराईमा मात्रै होइन राजधानीबाटै पनि लिएका उदाहरण खोज्न सकिन्छ ।
तर, ०६३ सालका बेला पनि गरिब परिवारका सदस्यहरूले नागरिकता पाउन बञ्चित भएका छन् । जनकपुर वार्ड नम्बर १० का दिवंगत भूपनारायण झाका भाइहरू त्यतिखेर नागरिकता पाउन बञ्चित भएका थिए । जतिखेर उनले नागरिकता पाए त्यतिखेर संविधान र कानुनमा जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान थियो । त्यो जन्मसिद्धको प्रावधान ०३८ सालमा अध्यादेशबाट खारेज गरिएको थियो । दिवंगत भूपनारायणका भाइहरूले नागरिकता पाउन बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतर्फ जुन भाइले जन्मसिद्धको नागरिकता पाए तिनका सन्तानलाई समस्या उत्पन्न भएको छ । उनीहरूलाई नागरिकता नभएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न समस्या भएको छ ।
नागरिकता नपाएपछि काम गर्न मुम्बई गएका थिए । उनीहरूलाई नागरिकता टोली कहिले आउने र कहिले जाने सही जानकारी हुन सकेन र तत्काल विमानबाट आएर नागरिकता लिन सहज पनि भएन । पछि नागरिकता पाइहाल्छ भनी त्यतिखेर नआएकाहरूलाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रघात हुन्छ र ?
विमल कोइरालाजस्ताले भन्न प¥यो नागरिकता दिँदा राष्ट्रघात हुन्छ हुँदैन भन्नु प¥यो ।
उनीहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ ले सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन परिपत्र जारी गरी नागरिकता दिनु सही भएको बताए । सन्देश झा, जनकपुरधाम
भीम, भीमार्जुन ज्यू ! हामीले नागरिकता पाउँदा राष्ट्रघात भएको हो ?
काँग्रेसमा तत्कालीन लोकतान्त्रिकबाट ११ केन्द्रीय सदस्य...
नेपाली काँग्रेसले तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका साङ्गठनिक संरचना समायोजन गर्नका...
यसपालीको दशैंको टीकाको साइत बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा रहेको नेपाल पञ्चाङग निर्णायक...
स्वास्थ्यकर्मीको अभावले थलियो लहान अस्पताल
अस्पतालमा एक जना मेसुसहित दुई जना मेडिकल अधिकृत, ४ जना स्टाफनर्स, २ जना अनमीको दरबन्दी...